lending8, Author at Mission Asset Fund - Page4of 10
लेखक: उधारो 8
२०१ 2015 मा अगाडि हेर्दै
lending8 मा फ्रेवुअरी 3, 2015 द्वारा लिखित।
हामी नयाँ प्रोग्रामहरूको साथ डिफर्ड एक्शन आवेदकहरू र व्यवसाय मालिकहरूप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई गहन गर्दैछौं।
यो एक नयाँ वर्ष हो र हामीले २०१ programming मा हाम्रो प्रोग्रामिंगमा धेरै नयाँ परिवर्तनहरू प्राप्त गर्‍यौं किनकि हामी धेरै मानिसहरूलाई वित्तीय बजारमा नेभिगेट गर्न र उनीहरूको पूर्ण आर्थिक क्षमता महसुस गर्न मद्दत पुर्‍याउँछौं।
त्यस पछि SB 896 को ऐन अगस्त २०१ 2014 मा, हामीसँग अब क्यालिफोर्नियामा शून्य ब्याज, क्रेडिट-निर्माण loansण राम्रोको लागि एक उपकरणको रूपमा मान्यता छ। हामी सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र मा मापन र विस्तार रूपमा, स्थिरता MAF अधिक ग्राहकहरु सम्म पुग्न को क्षमता को एक प्रमुख तत्व हो। २०१ 2015 मा शुरू भई, हामी सेवा र उत्पादनहरूको गुणस्तर स्तरको वितरण गर्न जारी राख्नको लागि, हामी क्यालिफोर्नियामा एमएएफको ग्राहकहरूको लागि to देखि TP१ टीटीपी १ टीको सानो उत्पत्ति शुल्क स्थापना गर्दैछौं।
हाम्रो loansण अझै पनि शून्य ब्याज रहनेछ तर एसबी66 by द्वारा समर्थित यस नयाँ शुल्कले हामीलाई वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्न, क्रेडिट ब्यूरोलाई भुक्तान डेटा रिपोर्ट गर्ने, लेनदेनको सुविधा पुर्‍याउने, र उत्तम प्रविधिको साथ निजी डेटा सुरक्षित गर्नबाट प्रशासनिक लागतहरू कभर गर्न अनुमति दिनेछ। क्षेत्र। यस नयाँ कोष को स्रोत संग, हामी समुदाय मा गहिरो लगानी को लागी र अधिक व्यक्तिहरु Lending Circles कार्यक्रम मा भाग लिन सक्षम छन् सुनिश्चित गर्न को लागी।
हामी पनि यस वर्ष बाहिर ल्याउँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरू साझेदारी गर्न उत्साहित छौं:
Lending Circles डिफर्ड कार्यको लागि
राष्ट्रपति ओबामाको साथ अध्यागमनको बारेमा भर्खरको कार्यकारी कार्यसंयुक्त राज्य अमेरिकामा करीव million० लाख अन्य आप्रवासीहरूले डिफर्ड एक्शनको लागि आवेदन गर्ने अवसर पाएका छन्, जुन अस्थिर आप्रवासीहरूका लागि निर्वासनबाट प्रशासनिक राहत हो।
एमएएफमा, हामीले दुई विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं, नागरिकता को लागी Lending Circles र Lending Circles DREAMers का लागि, महत्वाकांक्षी नागरिकहरू र युवाहरूलाई उनीहरूको नागरिकता र DACA अनुप्रयोगहरूको लागत वित्त गर्न मद्दत गर्न। हामी कडा परिश्रम गर्ने आप्रवासीहरु को प्रक्षेपण को साथ हाम्रो समर्थन मा गहरा गर्व छ Lending Circles डिफर्ड कार्यको लागि आगामी महिनाहरूमा नयाँ DAPA कार्यक्रममा अपेक्षित आवेदकहरू समावेश गर्न। यस नयाँ कार्यक्रमको विस्तार रोसेनबर्ग फाउन्डेशनबाट एक पीआरआईलाई धन्यवाद बनाउन सम्भव छ।
डिफर्ड एक्शनका लागि १टीपी T टी लस एन्जलसमा सुरु हुँदैछ, रोय र पैट्रसिया डिज्नी परिवार फाउन्डेशनले दिएको अनुदानको लागि धन्यवाद। कार्यक्रमले fer०० योग्य आवेदकहरूलाई fer 33१TP1T द्वारा डिफर्ड एक्शनका लागि आवेदन लागत घटाउन समर्थन गर्दछ - १TP2T465 बाट १TP2T310 मा। मेक्सिकन अमेरिकी अवसर फाउंडेशन, पिलिनो मजदुर केन्द्र र कोरियाली स्रोत केन्द्र समुदायमा यो कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने पहिलो १TP4T पार्टनरहरू हुन्।
र स्यान फ्रान्सिस्कोमा, हामी 1०१TP१टीटी म्याचको साथ मेक्सिकन मूलका डिफर्ड एक्शन आवेदकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन मेक्सिकन कन्सुलेटसँग साझेदारी गर्दैछौं।
व्यवसायका लागि Lending Circles
MAF सँग धेरै Lending Circles सदस्यहरू छन् जो उनीहरूको साना व्यवसायहरूमा लगानी गर्नको लागि क्रेडिट buildingण मर्मत गर्दैछन्, त्यसैले हामीले सिर्जना गरेका छौं व्यवसायका लागि Lending Circles। यो कार्यक्रम विशेष रूपमा महत्वाकांक्षी र हालको व्यवसाय मालिकहरूमा केन्द्रित छ जसले एक लेन्डि C सर्कल पूरा गरिसकेका छन्। सहभागीहरूले एक अप-फ्रन्ट loanण प्राप्त गर्दछ जसले क्रेडिट र भविष्यमा अधिक किफायती व्यवसाय ndingण विकल्पहरूको लागि ढोका खुला खोल्न मद्दत गर्दछ।
के केहि जाँच गर्नुहोस् हाम्रो उद्यमी सदस्यहरू एक सफल व्यवसाय चलाउनको लागि कत्तिको राम्रो क्रेडिट कत्तिको महत्त्वेपूर्ण छ भनेर हेर्न अहिलेसम्म हासिल गरेका छन।
यदि तपाईं यी अवसरहरूको बारेमा उत्साहित हुनुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा यसको बारे जाँच गर्नुहोस् Lending Circles र सामेल हुनको लागि साइन अप गर्नुहोस्!
बेटर बे एरिया निर्माण गर्दै
lending8 मा जनवरी 15, 2015 द्वारा लिखित।
तपाईं कसरी कुनै ठूलो चीजको हिस्सा हुन सक्नुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुहोस्
गुगलको प्रभाव चुनौतीमा शीर्ष १० फाइनलिस्टको रूपमा चयन गरिएको १ टीटी T टीले अमेरिकाभरि हजारौं परिवारहरूलाई उज्ज्वल वित्तीय भविष्यको लागि अवसर प्रदान गरेको छ। हाल खाडी क्षेत्रमा २०3,००० भन्दा बढी परिवारहरू किफायती interestण, कम ब्याज ,ण, र धेरै जसो मुख्यधार वित्तीय सेवाहरू पहुँच गर्न असमर्थ छन्।
एक राम्रो बे क्षेत्र निर्माण गर्न को लागी, हामी चाहन्छौं तपाईं हामीलाई ती परिवारहरूमा पुग्न र भिन्नता ल्याउन मद्दत गर्न।
को समर्थन संग गूगल, वाई एण्ड एच सोडा फाउंडेशन, र सिलिकन उपत्यका समुदाय फाउन्डेशन, हामी खाडी क्षेत्र वरिपरि गैर-नाफामुखी संस्थाको साथ साझेदारी गर्दैछौं १० नयाँ समुदायहरूमा Lending Circles प्रदान गर्न।
एक आधिकारिक १ टीटी T टी पार्टनरको रूपमा, चयनित संगठनहरूले साझेदार सुविधाहरूजस्ता प्रशिक्षण, सहायता र हाम्रो अनलाइन सामाजिक platformण मञ्चमा पहुँच प्राप्त गर्दछन्, जसको मूल्य १ टीटीपी ,000०,००० हो।
हामी गतिशील, समुदाय-आधारित संगठनहरू खोज्दैछौं जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रभावकारी, सांस्कृतिक सक्षम वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने बारे ख्याल राख्छन् र त्यो लक्ष्यलाई समर्थन गर्न पुरस्कार-विजेता Lending Circles कार्यक्रम प्रयोग गर्न चाहन्छन्।
यदि तपाईंको संगठन तपाईंको समुदायमा Lending Circles को शक्ति ल्याउनको लागि तयार छ, अब RFP जाँच गर्नुहोस्.
अधिक पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो तीन सूचना सत्रहरूमा एकमा साइन अप गर्न निश्चित गर्नुहोस्:
जनवरी २२: सैन फ्रान्सिस्को
जनवरी २th: ओकल्यान्ड
फेब्रुअरी:: माउन्टेन भ्यू
खाडी क्षेत्रमा आर्थिक अवसरलाई सहयोग पुर्‍याउन र Lending Circles कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक बन्धनलाई सुदृढ पार्न यो रोमाञ्चक अवसर हो। के तिमि हामीसँग सामेल हुनुहोस् वित्तीय छायामा एक उज्यालो विचार चम्काउन र एक राम्रो बे क्षेत्र निर्माण गर्न?
रोजा: नागरिकताको लागि लामो मार्ग
lending8 मा जनवरी 8, 2015 द्वारा लिखित।
अमेरिकी नागरिकता प्राप्तले रोजा रोमेरोको जीवनमा नयाँ चरण ल्याउँछ।
एल साल्भाडोरमा एक शिक्षकको रूपमा आजीवन क्यारियर पछि, रोजाले अमेरिका सर्ने निर्णय गरे। उनको बहिनीले आवासीय कागजात पाए पछि रोजाले आफ्ना छोरा, विद्यार्थी र जीवनलाई छाडेर जुलाई २ 23, २०० on मा सवार हुन छोडिदिए - जुन मिति उसले एक छिन पनि हिचकिचाएको छैन। त्यो मितिदेखि करीव years बर्ष, उनी अहिले अमेरिकी नागरिकको रूपमा सान फ्रान्सिस्कोमा बसिरहेकी छिन् भन्नेमा खुशी छन्।
रोजाको बाल्यकालले यो स्पष्ट पार्दछ कि उनी अरूको बारेमा जेसुकै सोच्न परे स्वप्नहरूको अनुसरण गर्न इच्छुक छन्।
एल साल्भाडोरमा हजुरआमा र छ जना भाइबहिनीहरूसँग हुर्केकी, रोजा विनम्र जीवन बिताउँछिन्। उनको हजुरआमाले गाई र बाख्राको स्वामित्व पाउनुभयो र उनीहरूको दुधबाट खट्टा क्रीम र चीज बनाए। रोजाले यी चीजहरूलाई स्थानीय बजारमा बेच्ने थियो।
यद्यपि उनको हजुरआमाले उनी नर्स बन्ने आशा गरेकी थिइन, तर रोजाले एकदमै छिटो महसुस गरिन् कि रगतको दृष्टिप्रति उसको घृणाले असम्भव तुल्याउन सक्छ। बरु, उनले एक शिक्षिकाको रूपमा जीवनको कल्पना गरे।
एक उच्च माध्यमिक विज्ञान शिक्षकको रूपमा २ year वर्ष लामो क्यारियर पछि, उनले भन्न सक्छिन् कि उनले आफ्नो सपनालाई जीवनमा ल्याईन्।
आजको दिनसम्म उनीका पूर्व विद्यार्थीहरूले उनलाई सडकमा रोक्ने छन् वा फेसबुकमा सन्देश पठाउँछिन् उनले उनीहरूलाई सिकाएको सबै कुराका लागि उहाँलाई धन्यवाद। यी क्षणहरूले एक शिक्षकको रूपमा उनको मनपर्ने समयहरू बनाएको छ। उनका दुई छोराहरू, जो अझै एल साल्भाडोरमा बस्छन्, उनीहरूको क्यारियरलाई एक उद्यमी र सेनामा कप्तानको रूपमा यति धेरै प्रेम गर्न आएका छन्।
रोजाले उनको बहिनी मार्फत एमएएफसम्म पुग्ने मार्ग भेट्टाइन् जो मेडामा ग्राहक थिइन् जसले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग पाइरहेको थियो। उनकी बहिनीले १ टीटी T टी कार्यक्रम सुनेकी थिइन र सोचिन् कि यो रोजाको लागि नागरिकताको आवेदनका लागि आवश्यक पैसा बचाउने उत्तम तरिका हो।
Lending Circles कार्यक्रममा सामेल हुने निर्णय रोजाको लागि अपेक्षाकृत सजिलो थियो।
उनी एल साल्भाडोरमा आफ्ना सँगी शिक्षकहरूको साथ अनौपचारिक ndingण सर्कलमा भाग लिने अवधारणासँग परिचित थिइन्। एमएएफमा लेन्डि C सर्कलमा सम्मिलित हुन अझ सजिलो भएको थियो जब उनले यसका सदस्यहरूका लागि सफलताको बलियो इतिहासबारे सिकेकी थिए।
रोजा १ टीटी T टीको शक्तिमा यति धेरै विश्वास गर्छिन् कि उनले आफ्नो पहिलो काम पूरा गर्नु अघि नै अरु ज्वाइन गरिन र लगातार उनको buildण बढाउने प्रयासमा कूल5को हिस्सा भइन्।
१ टीटी T टी कार्यक्रमले अमेरिकी नागरिक बन्ने वित्तीय बोझलाई कम गर्दछ सहभागीहरूलाई उनीहरूको buildण निर्माणको लागि अनुमति दिँदै जबकि उच्च १ टीटीपी २T680० आवेदन शुल्कमा मासिक भुक्तानी गर्दा। एक पटक सहभागीहरू लागू गर्न तयार भएपछि, उनीहरूले होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको अमेरिकी विभागमा चेक प्राप्त गर्दछन्। रोजाका लागि यसको मतलब उनले प्रक्रियामा अन्य सबै गाह्रो पक्षहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छिन्; जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो भाषा अवरोध थियो। रोजाले एक बर्ष भन्दा बढी अ English्ग्रेजी परीक्षाको लागि अध्ययन गरे। यो सबै प्रयास एक अन्तर्वार्ताको लागि हो जुन उनको १० मिनेट मात्र टिक्न सक्छ।
अन्तर्वार्ताको लगत्तै पछि, रोजाले थाहा पाए कि उनी बितिसकेकी छिन् र उनी नागरिक बन्नु पर्छ। समाचार सुनेपछि, उनले यस अवसरको लागि भगवानलाई धन्यवाद दिइन् र उनीमाथि खुशीको लहर आएको महसुस गरे। उनको अमेरिकी नागरिकता संग, उनी अब स्वतन्त्र रूपमा एल् साल्भाडोर यात्रा गर्न सक्छन् परिवार मा आफ्नो भ्रमण मा तनाव कम गर्न।
रोजाको कथाले हाम्रो सदस्यहरूको चरित्रको उत्कृष्ट उदाहरण दिन्छ। हामीले उसलाई ढोका देखायौं, र यसमा हिंड्न सक्ने क्षमता उनीसँग थियो।
एमएएफले संस्थापक बोर्डका सदस्यहरूलाई विदाई दिन्छ
lending8 मा जनवरी 6, 2015 द्वारा लिखित।
वर्ष बर्षको मार्गदर्शन पछि, एमएएफले २०१ found मा प्रस्थान गर्ने तीन संस्थापक बोर्डका सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
हामी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दछौं, हामी हाम्रो उत्कृष्ट निदेशक समितिको मान्यताका लागि केहि समय लिन चाहन्छौं - सात आश्चर्यजनक व्यक्ति जसले हाम्रो कामका लागि दृष्टि र बुद्धिमत्ता प्रदान गर्छन्। यो तीतो भावनात्मक भावनाहरूको साथ हो जुन हामी तीन संस्थापक बोर्ड सदस्यहरूलाई बिदाइ दिन्छौं: बोर्ड अध्यक्ष अनामारिया लोया, सचिव स्यान्टियागो (साम) रुइज, सदस्य ऑस्कर ग्रान्डे.
वर्षौंको दिशानिर्देशको माध्यमबाट, हामी मिसनमा जन्म भएको कुरालाई एक कार्यक्रममा बदल्न सक्षम भयौं जुन देशभरि फस्टाइरहेको छ, हजारौं परिवारहरूलाई उज्ज्वल वित्तीय भविष्य निर्माण गर्न सहयोग गर्दै।
करीव १० बर्ष अघि यी तीन नेताहरु एक स्वयंसेवी समितिमा सहभागी भए जुन एउटा रोमाञ्चकारी अवसरको लागि खटाइएको थियो: मिस जिलिलालाई फाइदा पुर्‍याउन लेवी स्ट्रॉस कारखानाको बिक्रीबाट १टीपी २ लाख १ करोडको लगानी।
जहाँ अरूले अनुदानलाई अवस्थित संगठनहरूलाई बल दिने अवसरको रूपमा हेरेको हुन सक्छ, अनामरिया, ऑस्कर, र सामले केहि फरक गर्नमा विश्वास गरे।
उनीहरूले आफ्ना विचार र सरोकारहरू हटाएर पूर्ण नयाँ संगठनको सम्भावनाको कल्पना गर्न हिम्मत गरे।
महिनाको अन्तर्वार्ता, बैठक र समुदायका सदस्यहरूसँग कुराकानी पछि, Mission Asset Fund को लागी विचार प्रवाह हुन थाले। उनीहरूको प्रयासको लागि धन्यवाद, buildingण निर्माण गर्न र वित्तीय छायाबाट बाहिर मार्गहरू निर्माण गर्न समर्पित संगठनको आवश्यकता पत्ता लागेको थियो।
अनामारिया, साम र ऑस्करले अमूल्य अन्तरदृष्टि र नेतृत्व प्रदान गरे। एमएएफ आज के हो यदि उनीहरूको समर्पण र दर्शनको लागि होईन भने।
शब्दहरूले ती सबै बर्षहरूमा उनीहरूको समर्थनको लागि पूर्ण रूपमा हाम्रो आभार व्यक्त गर्न सक्दैनन्। सबै MAFistas को तर्फबाट, हामी तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं!
Lending Circles डिफर्ड कार्यको लागि लामा विस्तार हुन्छ
lending8 मा डिसेम्बर 16, 2014 द्वारा लिखित।
डिफर्ड कार्य खोज्ने आप्रवासीहरूलाई आर्थिक सहयोग दिँदै
डिफर्ड एक्शनको बारेमा राष्ट्रपति ओबामाको भर्खरको घोषणासँगै आप्रवासी समुदायहरूको आर्थिक आवश्यकतामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा बढी भएको छ। नयाँ सुधारहरूले अतिरिक्त million मिलियन आप्रवासीहरूलाई डिफर्ड एक्शनको लागि आवेदन दिन सक्ने सम्भावना सक्षम गर्दछ। Statesण निर्माण अवसरहरू प्रदान गर्न १० राज्य र डीसीमा साझेदारी साझेदारी गरिसकेपछि, एमएएफ अब यो नयाँ कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन चाहनेहरूको लागि पनि त्यसो गर्न तयार छ।
रोय र पैट्रसिया डिज्नी परिवार फाउन्डेशनको उदार अनुदानको लागि धन्यवाद, MAF यससँग साझेदारी गर्दैछ मेक्सिकन अमेरिकी अवसर फाउंडेशन (एमएओएफ), कोरियाली स्रोत केन्द्र र पिलिनो मजदुर केन्द्र लस एन्जलस क्षेत्रमा डिफर्ड एक्शन खोज्ने व्यक्तिको लागि यसको पुरस्कार-विजेता १TP4T कार्यक्रम विस्तार गर्न।
को Lending Circles डिफर्ड कार्यको लागि कार्यक्रमले eligible०० योग्य आवेदकहरूलाई शून्य ब्याज loansणमा पहुँच गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ Action1१TP1T (१TP2T465 बाट १TP2T310 सम्म) ले creditण redण बनाउँदा पनि उनीहरूको क्रेडिट निर्माण गर्ने।
एमएएफ पहिले नै सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र मा हाम्रो आफ्नै ग्राहकहरु संग डिफर्ड एक्शन प्राप्त को प्रभाव देखेको छ। हाम्रो सात बर्षको कार्यहरूमा, हामीले we०० भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सफलतापूर्वक डिफर्ड एक्शनको लागि आवेदन दिन सहयोग गरेका छौं। सदस्यहरू मन पराउँछन् Itzel र येशू किफायती शिक्षा पहुँच गर्न र समुदायमा अधिवक्ता बन्नको आफ्नो लक्ष्य तिर जानको लागि Lending Circles प्रयोग गरेको छ।
“मैएओएफ सपना देख्ने कार्यक्रमको लागि १ टीटी T टी प्रस्ताव गरेर १ टीटी T टीसँग आफ्नो वर्तमान सम्बन्ध विस्तार गर्न उत्साहित छ,” मार्टिन कास्ट्रो, मेक्सिकन अमेरिकी अवसर फाउन्डेशनका अध्यक्ष र सीईओ भन्छन्।
"लस एन्जलस समुदायको सेवा गर्ने एक प्रतिष्ठित एजेन्सीको रूपमा, एमएओएफले एक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ जुन एक बच्चाको रूपमा हाम्रो देशमा आएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने छ र उनीहरूको सपनाको खोजीमा रहेका छन्। Lending Circles for Dreamers कार्यक्रमले लस एन्जलसका बासिन्दाहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍यायो जसले स्थगित कार्यको लागि आवेदन दिन चाहन्छ तर आर्थिक कठिनाइहरूको कारणले होईन। ”
मा ट्यून गर्नुहोस् राष्ट्रिय आप्रवासी एकीकरण सम्मेलन आज LA ११ मा बिहान ११::45। औपचारिक सुन्नका लागि घोषणा हाम्रो संलग्नता का निर्देशक, मोहन कानुनगो, र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोस क्विनोनेज द्वारा।
फ्रेम्सन्ट परिवार संसाधन केन्द्र सफलताको लागि एक नुस्खा प्रदान गर्दछ
lending8 मा डिसेम्बर 12, 2014 द्वारा लिखित।
हाम्रो पार्टनर फ्रेम्सन्ट परिवार रिसोर्स सेन्टरको सफलताको रहस्य के हो? यहाँ खोज्नुहोस्!
फ्रेम्सन्ट परिवार संसाधन केन्द्र (FFRC) र्याप-वरपर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन ट्रा-शहर क्षेत्र भरि कम आय भएका समुदायहरूलाई सशक्त बनाउँदछ। FFRC केवल MAF को लामो सक्रिय छैन Lending Circles प्रदायक, तर एक शून्य-प्रतिशत पूर्वनिर्धारित दर र १2२२ loan ००००० भन्दा बढी कुल loanण पोर्टफोलियोको साथ एक स्टार प्रदाता। हालसालै, मैले एक दिउँसो FFRC सँग उनीहरूको सफलताका बारेको सामग्रीको बारेमा जान्नको लागि र आउँदो बर्षको लागि सफल साझेदारीको रणनीति बनाउनको लागि खर्च गरें।
एमएएफको "पीयर लेन्डि” "कार्यक्रम, जसलाई एफएफआरसी भनिन्छ, एफएफआरसीको स्पार्कपोइन्ट वित्तीय सेवा कार्यक्रमलाई सुदृढ पार्छ जसले वित्तीय शिक्षा, विशिष्ट लक्ष्य, रोजगारी र प्रशिक्षण सेवाहरू, नि: शुल्क कर तयारी, सार्वजनिक पहुँचको साथ सहभागीहरूलाई सहयोग गर्न एक-बाट-एक वित्तीय कोचिंग समावेश गर्दछ। लाभ र कानूनी सेवाहरू। FFRC को स्पार्कपोइन्ट लक्ष्यहरू आय र बचत बढाउन, क्रेडिट निर्माण र कम debtण / आय अनुपात हो।
यो उनीहरूको क्रेडिट स्कोर बढाउने बारेमा मात्र होईन, बरु ठूलो वित्तीय लक्ष्यों को साकार गरी, जस्तै कि एक भरपर्दो कारको खरीदलाई आर्थिक सहयोग गर्नको लागि तिनीहरू काम गर्न सक्दछन् वा अपार्टमेन्ट भाडामा लिनको लागि बलियो क्रेडिट प्रोफाइल विकास गर्न सक्दछन्।
सामान्यतया म सहभागीको आर्थिक ईतिहासको स्नैपशट मात्र लिन्छु उनीहरूको अनुप्रयोगबाट जब तिनीहरू कार्यक्रममा सामेल हुन्छन्। वित्तीय कोचहरू र कार्यक्रम संयोजक क्रिस्टिन LaBadie अर्कोतर्फ कार्यक्रमको प्रभाव हेर्न। ओहलोन कलेजमा बैठक फरक थियो किनकि कोचहरूले सम्पत्ति निर्माण क्षेत्रमा सहयोगीहरूका लागि सहभागीको कथाहरू हाइलाइट गर्थे।
'मेरी', जसको नाम हामीले गोपनीयताका लागि परिवर्तन गरेका थियौं, FFRC को सहभागी हो जसले मसँग कुराकानी गर्‍यो। उनी उत्तम जीवनको आशामा नाइजेरियाका आफ्ना बच्चाहरूसहित संयुक्त राज्य अमेरिका बसाइन्। उनको श्रीमान पछाडि रहनुपर्थ्यो र जब उनी आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न सक्थे तब उनले उनलाई पैसा पठाउँथे।
उनले आफ्ना बच्चाहरूको पालनपोषण गर्न अथक प्रयास गरेकी थिइन्, र श्रीमान्को पैसाबाट पनि उनी मुश्किलले भत्काइन्। सहकर्मी ndingण दिंदा उनलाई उनको क्रेडिट निर्माण गर्ने र कार खरीद सहित वित्तीय लक्ष्य तिर बचत गर्ने अवसर दिइयो। यातायातमा भरपर्दो पहुँच हुनु आवश्यक थियो ताकि उनी एक हेरचाहकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्दछन्। उनको buildingण निर्माण गरेपछि 'मेरी' अमेजनको साथ दोस्रो पार्ट टाइम रोजगारी लिन सक्षम भएकी थिइन, र अतिरिक्त आम्दानीले उनको परिवारलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ।
'मरियम' अहिले ट्र्याकमा छ र एफएफआरसीको वित्तीय कोचको एक-एक समर्थन र Lending Circles कार्यक्रममा समुदाय समर्थन र क्रेडिट निर्माण उपकरणहरू मार्फत आफ्ना लक्ष्यहरू हासिल गर्न कडा मेहनत गरिरहेकी छ।
क्याट्रिना रिवेरा अर्का ग्राहक हुन् जसले धेरै राम्रो गरिरहेकी छिन्। उनीले दुई पटक पियर लेन्डिंग प्रयोग गरी र score points अंक बढाइन्! उनीसँग दुई पार्टटाइम कामहरू छन् र उनी एक दिन आफ्नै ट्याक्स व्यवसाय खोल्न चाहान्छिन् किनकी उनले आफ्नो क्रेडिट स्कोर बढाइरहेकी छिन्। उनी हाम्रो निःशुल्क कर कार्यक्रम (VITA) को लागि पनि स्वयंसेवा हुन् जसले उनलाई धेरै थप शिक्षा प्रदान गरेको छ र कर तयारीमा आईआरएस प्रमाणीकरण।
उनी धेरै अंक प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध थिइन र शिक्षामा विश्वास गर्थिन्। उनले हाम्रो आर्थिक कक्षा took पटक लिइन्! उनीले हामीले प्रस्ताव गरेको पहिलो लिनलाई आवश्यक थियो - मनीस्मार्ट, त्यसपछि हामीले क्रेडिट सुरु गरेपछि क्रेडिट मर्मत गर्ने विकल्प छनौट गर्‍यो र यस वर्ष उनले क्रेडिट मर्मत दोहोर्याई। किन सोध्यो, जब उनले त्यहाँ यति धेरै राम्रो जानकारी छ कि उनी केहि मिस गर्न चाहँदैनन्! उनी आफ्नो अंक बढाउन धेरै मेहनत गरिरहेकी छिन् र उनी अहिले उनको कर व्यवसायको लागि व्यावासायिक योजनामा काम गरिरहेकी छिन्।
LaBadie साझा गर्दछ कि प्रमुख घटक धेरै वित्तीय कोचिंग र शिक्षा हो।
म विश्वास गर्दछु एक सफल पोर्टफोलियोमा प्राय: साझेदारहरू सम्मिलित हुन्छन् जुन तपाईंको समुदायसँग बलियो सम्बन्ध छ। कसरी लेन्डि C सर्कल प्रोग्रामहरू तपाईंको संगठनको अवस्थित कार्यक्रमहरू र सेवाहरूको पूरक हुन सक्छ भनेर अन्वेषण गर्न एक साझेदार व्यवस्थापकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
FFRC एक भन्दा बढि लगातार Lending Circles पार्टनर हो, Lending Circles प्रति वर्ष चार पटक प्रस्ताव गर्दछ। एमएएफ ले संगठनबाट सुरु भएको एकल loanण कहिले पनि चार्ज गर्नुपर्दैन। मलाई थाहा छ कि उनीहरूको loanण पोर्टफोलियोको तारिफ प्रदर्शन धेरै हदसम्म वित्तीय कोचिंग र प्रत्येक व्यक्तिलाई एक-अर्को समर्थनमा भएकोले हो।
फ्रेम्सन्ट FRC एक स्वागत स्थान हो जहाँ परिवार र व्यक्तिको पालन पोषण हुन्छ, प्रोत्साहित गरियो, र आफैंको मद्दतको लागि आफ्नै शक्तिमा निर्माण गर्न गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्‍योएन डी अन्य। FFRC साझेदार Mission Asset Fund SparkPoint को भागको रूपमा, बे क्षेत्रको संयुक्त मार्गको एक कार्यक्रम। फ्रिमन्ट मानव सेवा विभाग / FRC डिभिजन को शहर एक लीड FRC पार्टनर हो र यसको पियर endingण कार्यक्रम चलाउँछ। Fremont FRC ndingण सर्कलहरु संगठित गर्न को लागी सहभागीहरु आफ्नो क्रेडिट निर्माण गर्न मा सक्षम हुन्छन् र वित्तीय लक्ष्य तिर बचत गर्न। FFRC शून्य प्रतिशत पूर्वनिर्धारित दरको साथ loanण मा लगभग $90,000 को उत्पत्ति भएको छ।
क्रेडिट दिनुहोस् जहाँ महत्त्वपूर्ण छ
lending8 मा डिसेम्बर 3, 2014 द्वारा लिखित।
यो डिसेम्बर, तपाइँको समुदाय मा क्रेडिट-बिल्डर्स समर्थन गर्नुहोस्।
यहाँ एमएएफमा, हामी भाग्यशाली हौं कि अविश्वसनीय मानिसहरूले हाम्रो उत्पादनहरू उनीहरूको वित्तीय लक्ष्यहरूमा पुग्न प्रयोग गर्ने अवलोकन गर्ने मौका पाउँदा हामी भाग्यशाली छौं। यस वर्ष, हामीले धेरै मानिसहरू हाम्रो ढोकाबाट भित्र पसेका छौं र क्रेडिट-बिल्डर्सको रूपमा छोडेका छौं। हामीले करीव १००० सदस्यहरूको सेवा गरेका छन, करीव १TP2T710,000 को कुल loanण मात्राको साथ १ 13 नयाँ साझेदारी बनाए।
भविष्यको बारेमा हेर्दा हामी हाम्रो सदस्यहरूको सफलताहरू मनाउन उत्साहित छौं र धेरैलाई स्वागत गर्दछौं। हामी हाम्रो समाधानको स्केलिंगको लागि तत्पर छौं, त्यसैले हामी नयाँ साझेदारहरूसँग काम गर्न सक्दछौं र अझ बढी सदस्यहरूसम्म पुग्न सक्दछौं।
हामीले हाम्रो वार्षिक अभियान सुरू गरेका छौं र तपाईंलाई वित्तीय छायाबाट बाहिर निस्कन काम गर्नेलाई "क्रेडिट दिनुहोस्" भनेर आग्रह गर्दछौं। चाहे यो हो एकल अभिभावक, एक नयाँ व्यवसाय मालिक वा एक महत्वाकांक्षी DREAMer, सबैको जीवनमा क्रेडिट मामिलाहरू।
हाम्रो अविश्वसनीय सदस्यहरू हाइलाइट गर्न, हामी प्रत्येक हप्ता नयाँ कथाहरू ईमेल, सामाजिक मिडिया मार्फत साझेदारी गर्दैछौं र यहाँ हाम्रो ब्लगमा।
त्यहाँ सम्मिलित हुने धेरै धेरै तरिकाहरू छन् र क्रेडिट-बिल्डर्स समर्थन:
१) दान दिनुहोस् यहाँ
२) तपाईंको क्रिसमस उपहारहरू खरीद गर्नुहोस् AmazonSmile - तपाईंको खरीदको एक हिस्सा MAF तिर जान्छ!
)) शब्द फैलाउनुहोस्। हाम्रो सामाजिक मिडिया पोष्टहरूमा साझेदारी गर्नुहोस् फेसबुक र ट्विटर, ताकि तपाइँका साथीहरूले पनि सिक्न सक्छन्।
)) तपाइँको रोजगारदातालाई सोध्नुहोस् कि तपाइँ एक मिलान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ योगदान
हाम्रो बढ्दो समुदायमा योगदान पुर्‍याउने धेरै तरिकाहरूका साथ, तपाईं आज क्रेडिट दिनुहुन्छ?
ब्लांका: उनको ब्यूटी सैलुन व्यवसाय सपना निर्माण गर्दै
lending8 मा नोभेम्बर 27, 2014 द्वारा लिखित।
ब्ल्यान्काको दिनहरू उनको बहिनीको कपाल ब्रिटि। गरीरहेको छ।
ब्लान्काको बाल्यकाल सधैं खुशी थिएन। मेक्सिकोमा हुर्केका उनका परिवारले सिक्नको लागि उनको अभियानमा सहयोग गरेनन र उनलाई उनलाई सफा गर्ने र श्रीमती हुनु कसरी राम्रो हुन्छ भनेर बताउँछिन्। उनीसँग परिवारसंग सबैभन्दा खुशीको समयहरू थिए कि सबैजना लाइनमा उभिएर आफ्नो कपाल काट्न अनुरोध गर्थे। ब्लांकाको लागि, हेयरकेयर उनको रचनात्मकताको लागि एक आउटलेट थियो जुन उनले आफ्नो काकाबाट सिकेकी थिईन्, उनको परिवारमा थोरै व्यक्तिहरू मध्ये एक जसले उनको प्रतिभालाई समर्थन गर्थि।
उनी हुर्किएपछि उनी जान्छिन् कि उनी एक सलुनको स्वामित्व लिन चाहान्छिन्। उनको काकाको आफ्नै नाईको पसल छ भनेर पत्ता लगाए पछि, उनले चाँडै आफ्नो कैंचीलाई लगिन् र परिवार र साथीहरूलाई कपाल काट्न उत्सुक भइन्। तर उनको विवाह पछि, परिवारको पालनपोषण गर्न बिताएको समयले उनलाई उनको जोशको साथ छोयो। आफ्नी छोरीको स्वास्थ्य अवस्थाको राम्रो हेरचाह गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका नपुग्दासम्म उनले फेरि आफ्नो सपनाको मनोरंजन गर्न थाले।
संयुक्त राज्य अमेरिका आए पछि, ब्ल्यान्काले महसुस गरे कि उनको सपना सुन्दरताको लागि पहिलो चरण ब्यूटी स्कूलमा गइरहेको थियो।
यो हासिल गर्न, उनलाई महँगो ट्युसन शुल्कको लागि पैसा बचत गर्नु आवश्यक छ। धेरै वर्षसम्म दुईवटा काम गरेर, उनले अन्ततः निर्णय गरे यो समय थियो र क्यालिफोर्निया ब्यूटी स्कूलमा भर्ना भयो। तर ब्लांका रातभरि पूर्ण-समय विद्यार्थीमा रूपान्तरण हुन सकेनन्; उनी अझै पढाई आठ घण्टा काम गर्नुहुन्थ्यो उनको अध्ययनको शीर्षमा।
“म काम गर्दै थिए, काम गर्दै थिए, काम गर्दै थिए; तर मैले कहिल्यै हार मानिनिन, ”उनले भनिन्।
स्नातक गरे पछि, ब्लांका सैलुन काम खोज्न गए। उनीले खाडी क्षेत्रका विभिन्न सैलूनमा काम लिन सक्ने सबै कुरा सिक्न सानो या तलबको लागि काम गरिन्, यद्यपि उनीहरू उनलाई तालिम दिन हिचकिचाइरहेका थिए।
"हरेक एक सैलूनमा, मैले केही नयाँ कुरा पनि सिकें।"
एक पटक उनीले आफ्नो ग्राहकको सूची निर्माण गरे र ठूलो विशेषज्ञता स accum्कलन गरिसकेपछि, उनीले सलुन मालिकमा सर्ने अवसर देख्नुभयो। नयाँ सैलुन खोल्न प्राय जसो loansण लिनु आवश्यक पर्दछ, त्यसैले ब्ल्यान्का उनीहरुको पहुँचको लागि उधारो बनाउन कटिबद्ध थिए।
यद्यपि उनले स्थानीय -ण निर्माण र वित्त संगठनहरूको सल्लाह खोजे, ब्लांकाले यी कुराकानीहरू "निराश र अलमल्लमा पारे"।
Mission Asset Fund चाँडै नै उनलाई धेरै बिभिन्न बिभागमा जडान गर्‍यो जहाँ उनीले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन र चालमा लिन के लिन सक्दछन् भन्ने बारे अझ राम्रो ज्ञान हासिल गर्छिन् र उनले बिस्तारै आफ्नो व्यवसाय योजनाको नक्शा बनाउन थालिन्। एमएएफ मार्फत, उनले व्यवसायिक loansणहरूमा पहुँच गरेकी थिइन कि जब एक सैलून खरीद गर्ने मौका उसको ढोका ढकढक्याइयो, उनी तयार भइन्। उनी काम गरिरहेकी सलुनका मालिक रिटायरमेन्टका लागि तयार थिए र बेच्न चाहन्थे, त्यसैले बियन्काको लागि यो मुख्य अवसर थियो।
यद्यपि सैलुन स्वामित्वमा संक्रमण कुनै पनि हिसाबले सहज यात्रा थिएन।
आफ्नो जीवनको अन्य चरणहरू जस्तै, ब्ल्यान्काले स्वामित्व स्थापित गर्न सही कागजात प्राप्त गर्न कडा संघर्ष गर्नुपर्‍यो। कागजी कार्य र इजाजत पत्र सम्झौताको पहाडहरूले प्रक्रियामा ढिलाइ गर्‍यो। अन्तमा १ अक्टुबर, २०१ 2014 मा, सैलून उनको भए। अब ब्लांका अन्ततः उनको सपना विस्तार मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। एक सबै एक सैलून को एक नयाँ कर्मचारी को रूप मा उत्पन्न हुन्छ कि कठिनाइहरु सबै राम्ररी जान्न, उनको लक्ष्य एक ड्राइव संग मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सिक्न र तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्न को रूप मा राम्रो प्रशिक्षण छ। "म तिनीहरूका लागि सब भन्दा राम्रो र व्यापारको लागि उत्तम चाहन्छु।" उनी जान्दछन् कि केहि कर्मचारीहरु अरुले भन्दा छिटो सिक्न सक्छन र विशेष क्षेत्रहरुमा सामर्थ्य हुन सक्छ।
"तपाईंको हातमा औंलाहरू जस्तै, हामी सबै फरक छौं।"
सैलुन अब पारिवारिक मामिला हो। बियान्का र उनका छोरीहरू सबै व्यापारको एक अंश व्यवस्थापन गर्छन्। भविष्यमा ब्लान्का सौन्दर्य स्टोर, श्रृंगार सैलुन, र बहु हेयर सैलुन समावेश गर्न आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहन्छ। र उनको ड्राइभ र प्रेरणा संग, यो उनको सफलता मा विश्वास गर्न गाह्रो छ।
पाठ कमाईएको १ टी टी T टी २: ढोकाबाट छुटकारा पाउनुहोस्
lending8 मा नोभेम्बर 25, 2014 द्वारा लिखित।
किन समुदायमा आधारित समाधानहरू केवल एक राम्रो सोच भन्दा बढि छन्।
जब म पछिल्लो गर्मीमा स्टार्टअप ईन्क्यूबेटर अन्तरिक्षमा काम गर्दै थिएँ, मँ व्यवसाय शुरू गर्न सबै प्रकारका सल्लाहहरू सुन्ने मौका पाउँथे। मलाई जे स्पष्टसँग याद छ त्यो पुरानो "ढोकाबाट बाहिर निस्किनु" अभिव्यक्ति थियो। तपाइँको विचार प्रशंसनीय छ कि बाहिर आंकडा गर्न आवश्यक छ? बाहिर जानुहोस् र सडकमा व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरूले यो प्रयोग गर्थे भने। मूल्य निर्धारण समायोजन गर्न आवश्यक छ? बाहिर जानुहोस् र उनीहरूलाई कति तिर्ने भनेर सोध्नुहोस्। तपाईं आफ्नो कुर्सीको सुविधाबाट केहि गर्न सक्नुहुन्न।
जबकि यो वास्तवमै धेरै सत्य हो, म मद्दत गर्न सक्दिन तर त्यस्तो सुझावको समस्याग्रस्त प्रकृतिको बारेमा आश्चर्यचकित छु। यदि तपाइँ आफैंले तपाइँको ढोका बाहिर तपाइँको ग्राहकहरु संग कनेक्ट गर्न को लागी बाध्य पार्नु पर्छ, के तपाइँ वास्तवमै तपाइँको सेवा पहिलो स्थान मा प्रस्तुत गर्नु पर्छ?
मैले यस “ढोका बाहिर” विचारमा पहिलेदेखि नै शpt्कास्पद एमएएफसँग मेरो फेलोशिप शुरू गरें, र यहाँ मात्र दुई महिनापछि मैले महसुस गरें कि मैले अन्ततः केही स्पष्टता पाएँ।
यो महिना मलाई ब्लांका, एक Lending Circles सदस्य साक्षात्कार मौका प्रस्ताव गरीएको थियो। त्यसो गर्न, मैले शाब्दिक रूपमा उनलाई उनको ब्यूटी सैलुनमा भेट्न अफिस छोड्नुपर्‍यो। अब, साधारण स्टार्टअप बुद्धिमत्ताको आधारमा, म यस्तो कार्य गर्नका बारे घबराएको वा चिन्तित हुनुपर्दछ। तर वास्तवमा म साँच्चिकै उत्साहित थिएँ। म उनको व्यक्तिगत कथा सुन्न कुर्दिन सक्दिन - उनी कसरी आफ्नो परिवारको पालनपोषण गरीरहेकी छिन् जब कि एक ब्यापार सुरु गर्ने सपना प्राप्त गर्दै। मैले अन्तर्वार्ता छोडेको भन्दा बढी जोसका साथ छोडियो। मैले ब्लान्काको शक्ति र लचिलोपनको बारेमा सुन्ने सबैलाई भनें र MAF ले उनको यात्रामा सानो भूमिका खेलेकोमा कस्तो अचम्म लाग्यो।
र त्यस्तै, बाहिर ढोका भ्रम आधिकारिक बिग्रिएको थियो।
जब म अफिसमा फर्कें, म कार्यालयको सामान्य दिनको सम्भावित सदस्यसँग गहन छलफलमा म हाम्रा कार्यक्रम टोलीहरूसँग हिंड्थें। त्यो हो जब त्यसले मलाई हिर्कायो, त्यो ढोका यहाँ अवस्थित छैन। यदि एक संगठन सही तरीकाले निर्मित छ भने, यसले सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूको दिमागबाट यसको समाधान निकाल्दछ। पर्खालहरू कहिँ त्यहाँ हुँदैन किनभने स्रोत समुदाय नै हो र यसैले एउटा ठोस आधार सिर्जना हुन्छ।
समुदाय संचालित वातावरणले एमएएफलाई समय बित्दै जानको लागि अझ प्रगति गर्न सक्षम गर्दछ।
ब्ल्यान्काको चरित्रको प्रेरणादायक पक्षहरू देख्दा मलाई उनको सौन्दर्य सैलुन छोड्न मद्दत गर्‍यो जुन हाम्रो मिशनको एक मजबूत भावनाको साथ पुनर्निर्माण भयो। मिशन-निर्माण क्लिच बाहिर कदम, साक्षात्कार वास्तवमा मलाई मेरो काम अझ राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ। मैले ब्लान्कालाई साक्षात्कार गर्नुको वास्तविक कारण नैतिक बलको लागि थिएन; यो उनको कथा सुन्न थियो त्यसैले हामी यसलाई हाम्रो सदस्यहरू र साझेदारहरूसँग साझा गर्न सक्दछौं र यसलाई हाम्रो कार्यक्रमहरू अझ राम्रो बनाउन प्रयोग गर्न सक्दछौं।
यो MAF को मान को कोर मा हिट; हाम्रो सदस्यहरूसँगको अन्तर्क्रियाले हामीलाई उनीहरूले के अभाव भएको कुरा बताउँदैन, तर यसको सट्टामा उनीहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने सबै। हाम्रो सदस्यको शक्तिको पहिचानले हामीलाई कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिनेछ जसले उनीहरूमा ठूलो महत्त्व राख्छ; यो एक राम्रो MAF र एक मजबूत समुदाय को लागी बनाउँछ।
जहिले पनि म एमएएफका सबै सदस्यहरूबारे सोच्दछु जसले उनीहरूको जीवनको अर्को चरणमा पुगेका छन्, म सोच्दछु कि सबै संस्थाहरू ढोकाबाट हिचकिचाएर हराउँदैछन्, यसमा हिंड्नु कत्तिको गाह्रो छ भनेर गुनासो गरेर।